Fil d'actualités du 25/04/2018
25/04/2018 - 08:45 : VATSIM-PIANARANA: Mpianatra n'y Oniversiten'i Mahajanga miisa 5 nahazo vatsim-pianarana mandritra ny 5 volana any Allemagne amin'izao fitoana izao.
25/04/2018 - 08:30 : SENDIKAN'NY MPIASAN'NY ORINASA AFAK'HABA: Hanao fanambarana eny amin'ny tranompokonolona Isotry izy ireo amin'ity maraina ity izay hifantoka amin'ny fiaraha-mientana amin'ny Vondron-tsendika SSM amin'ny tolona eny Analakely.
25/04/2018 - 08:15 : CHAMPION'S LEAGUE: Resin'i Liverpool tamin'ny isa 5-2 ny AS Roma alina teo amin'ny lalao mandroson'ny dingana manasa-dalana.
25/04/2018 - 08:00 : SOLOMBAVAMBAHOAKA HO AN'NY FANOVANA: Hitanjozotra eny Anosy izy ireo sy ny vahoaka anio hanatitra taratasy fitoriana ny filoha eny noho ny fandatsahan-dra, ary mitaky ny fialan-dRajaonarimampianina.
24/04/2018 - 23:30 : SONIERANA: Fiara kely iray marika Dacia Sandero no nidona tamin'ny andrin-jiro amin'izao fotoana izao, ka saika niongana hatramin'io andrin-jiro io mihitsy, ary tapaka ny jiro.
24/04/2018 - 17:00 : IAVOLOHA: Nampiantso ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana sy ny masoivoho vahiny vitsivitsy vahiny ny filoham-pirenena, ary misy ny fivoriana mikaton-trano.
24/04/2018 - 16:30 : SSM: Nisy ny fihaonana ara-tsratejika nataon'ireo mpitarika ity Randrambaon'ny sendika ity ny tolakandro teo handinhihana ny paikady hitondrana ny tolona eny Analakely.
24/04/2018 - 16:00 : ANTANANARIVO: Manohitra ny fanambarana nataon 'ireo sefom-pokotany nanamavo ny hetsika tarihin'ny depiote ny fikambanan 'ny mpitantsoratra sy mpitambolan'ny fokontany 192 manerana ny kaominin'Antananarivo Renivohitra.
24/04/2018 - 15:30 : ANALAKELY: Famangiana sisa no natao eny amin’ny Lapan’ny tanàna fa tsy misy fiandrasam-paty intsony satria efa naverina any amin’ny fianakaviany avy ireo razana izay avy eny Itaosy sy Ambohimanarina.
24/04/2018 - 15:00 : RAHARAHA RALEVA: Niakatra fitsarana androany tany Fianarantsoa ny raharaha fangatahana fahafahana tanteraka ho an'ity mpiaro ny tontolo iainana nohelohin'ny fitsarana ity, saingy nahemotra ho amin'ny 22 Mey indray ny didy.
Archive du 20171115
Antananarivo Efa feno mpitsoa-ponenana vahiny ?
Tranga iray nahatonga saina ny maro ary niteraka adihevitra be hatry ny omaly ilay sarina rangahy iray manao fiakanjona arabo misy volombava be nivatsy entana isan-karazany nandeha teny an-dalambe teto Antananarivo Renivohitra.
Potika ny firenena, mahantra ny Malagasy Mila vina ara-toekarena mazava isika, hoy Lanto Ratsida
Ao anaty fotoan-tsarotra i Madagasikara amin’izao noho ny antony maro. Anisan’ny lesoka ny tsy fahafehezan’ny mpitondra ny firenena. Ny vahoaka etsy an-daniny toa manaiky, ka zary tandra vadinkoditra ny miaina anaty fahantrana sy mitazam-potsiny ny hadalan’ny mpitondra.
Marc Ravalomanana Hopotehina hatramin’ny farany…
Mazava ny zava-misy amin’ny fikatsahana hamotika an’i Marc Ravalomanana mba tsy hirotsahany hofidiana filoha amin’ny 2018. Dradradradraina fa efa nosazian’ny fitsarana ny tenany, ka tsy afaka ny hirotsaka hofidiana.
Hery Rajaonarimampianina « Antoky ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana »
Nohavaozina tanteraka ny sekoly ambaratonga fototra etsy Soanierana I, fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra. Omaly no noraisina tamim-pomba ofisialy ny fotodrafitrasa taorian’ny volana maro nanatanterahana ny asa.
Taratasin’i Jean Samy nitapolaka !
Tena sendra ny nahay azy kosa aloha ianao tamin’iny indray maka iny ry Jean a ! F’angaha moa izy ity rehefa avo vava sy mahery setra dia manana ny marina ?
Kaominin’Antananarivo Renivohitra Mangarahara tanteraka ny fitantanana
Manoloana ny fanaratsiana sy fanenjehana ataon’ny mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo Lalatiana Ravololomanana, ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana dia nampiantso mpanao gazety tetsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely omaly ny lefitra faharoan’ny ben’ny,
Dosie very tao amin’ny fitsarana Tovolahy iray nidoboka eny Antanimora
Nadoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay zanaky ny mpiray tampo amin’i Ihanta Randriamandrato, izay notondroina ho tompon’antoka tamin’ny halatra dosie tao amin’ny fitsarana.
CNaPS – LABEL HOREB Miara-miasa hanampy tantsaha 176 any Atsinanana
Napetraky ny lalàna iraisam-pirenena sy ny lalàmpanorenana malagasy fa zo fototra ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ny isam-batan’olona.
Lalàna momba ny fananan-tany Tsy ampy ny fanazavana
Taorian’ny fahalanian’ilay volavolan-dalàna mikasika ny fananantany teny anivon’ireo parlemantera ny herinandro teo dia tsikaritra ho nirongatra ny ady teto amin’ny firenena.
Mpamily taxi be sy ny resevera Mitondra 5.000 Ar isan’andro mody raha kely
Tsy maintsy mitondra vola mody 5.000 Ar isan’andro raha kely ireo mpamily taxi-be sy ny mpanampy azy, eto an-drenivohitra raha araka ny fanadihadiana natao.
Lehilahy Mpanao herisetra avokoa ny 70 %
Mpanao herisetra avokoa ny 70%-n’ny lehilahy. Raha araka ny tarehimarika nomen’ny tetikasa Sahala dia efa saika niharan’ny herisetra ny 70 %-n’ny vehivavy Malagasy manerana ny Nosy fa ny endrika hisehoany no samihafa.
Mananjary Tafajoro ny « Association Vary sy Rano »
Tafajoro ary nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny sabotsy 11 novambra 2017 teo ny “Association Vary sy Rano” manana an’Atoa Andriamanampisoa Gégé Bernard ho filohany.
Raharaha ISTRALMA Ambohitsilaozana Hikarakara fampihavanana ireo olobe
Nivoitra nandritra ny dinik’asa niarahan’ireo olom-panjakana sy tangalamena ary ny fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny oniversite annexe Ambohitsilaozana (ISTRALMA) ny alatsinainy 13 novambra teo fa hiroso amin’ny fampihavanana ny mpitantanana eo anivon’ny ISTRALMA sy ny mpianatra ireo oloben’ny faritra Alaotra Mangoro.
Sampana fivondronana laika FJKM Hikarakara lalao entina hitoriana ny filazantsara
Hikarakara lalao goavana entina hitoriana ny filazantsara ny Sampana Fivondronana Laika eo anivon’ny fiangonana FJKM.
Gidragidran’ny baolina kitra Malaza ratsy ny tompon’ny Elgeco Plus
Mbola resa-be hatramin’izao ny gidragidra niseho tany Fianarantsoa nandritra ny lalao nifanandrinan’ny ekipan’ny CNaPS Sport Itasy sy ny Elgeco Plus Itasy ny faran’ny herinandro teo.
Tsy mba menatra mihitsy !
Mihazakazaka ny fambaboan’ny fanjakana HVM ny fon’ny vahoaka. Anisan’ny resena lahatra fatratra ny eto Antananarivo. Raikitra ny fitokanan-javatra etsy sy eroa..